ချစ်သူရဲ့ ငုံထားမတတ်ချစ်တာကို ခံနေရတဲ့ ရာသီခွင် (၃)မျိုး
July 3, 2019 Cele Love 0
ချစ်သူရဲ့ ငုံထားမတတ်ချစ်တာကို ခံနေရတဲ့ ရာသီခွင် (၃)မျိုး Para – အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ ဆုလာဘ်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ကို ငုံထားမတတ်ချစ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ လူတွေက ကိုယ့်ကံနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်တည်လာကြလို့ပါ။ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပြီး ချစ်သူရဲ့ ငုံထားမတတ်ချစ်တာကိုခံနေရတဲ့ ရာသီခွင်တွေ ဘယ်ရာသီခွင်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် နော် […]
မြန်မာ ပြည်သူ အားလုးံအတွက် အရေးကြီးသတင်း အရေးကြီးသတင်း !! Red Alert Warning !!အများသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ။ သတိထားကြ ပါ …။ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်ရှိလာပါပြီ။ အစိုးရအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ အခု အခြေအနေဟာ ရာသီတုပ်ကွေး […]
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ချီတက်ဆန္ဒပြကြမည့်အစီအစဉ်ထွက်ပေါ်လာ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ချီတက်ဆန္ဒပြကြမည့်အစီအစဉ်ထွက်ပေါ်လာ ဇူလိုင်လ ၆ရက်နေ့၊ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ချီတက်ဆန္ဒပြကြမည့်အစီအစဉ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ထွက်ပေါ်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါ ပြီ …။ အခုလာမယ့် ဇူလိုင်ည ၆ရက်နေ့မျာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ တရားခံမဖမ်းမိသေးတဲ့အမှုဖြစ်စဉ်အတွက် ချီတက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီဆန္ဒပြမှုဟာ ဘယ်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကိုမှကိုယ်စားပြုမှာမဟုတ်ပဲ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုသာထုတ်ဖော်သွားဖို့အတွက် စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ် …။ ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို … (၁) […]
အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ(ရုပ်သံ) မလေးရှားနိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမရဲ့ကောင်လေးက ထားသွားတာကို အကြောင်းပြုပြီး Live လွှင့်ကာ ငိုယိုခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက် ကောင်မလေးဟာ ခေါင်းလျှော်ရှည်တွေကို ဖျော်ရည်အလား စိတ်မှာထားပြီး၊ အားရပါးရ သောက်ပြခဲ့တာပါ …။ […]
၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးပြီးတော့ ရမ်းတယ်ဆိုပြီး ချိုပြုံးနှင့် မို့မို့မြင့်အောင်တို့ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ သင်းသင်း (ရုပ်သံ )
၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကျုံးပြီးတော့ ရမ်းတယ်ဆိုပြီး ချိုပြုံးနှင့် မို့မို့မြင့်အောင်တို့ကို ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ သင်းသင်း (ရုပ်သံ ) သင်းသင်း က ဝေဠုကျော် အား ကာမလိမ်လည်ရယူမှု ပုဒ်မ (၄၁၇) ဖြင့် စွပ်စွဲ တရားစွဲဆို တိုင်ကြားထားသည့် အမှုကို ဒီကနေ့ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့က […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ ” Justice for Victoria ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက်အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ ” ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဖြစ်ပွားခဲတဲ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Wisdom Hill private မူကြိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရတဲ့ အသက်၃နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့သမီးငယ်လေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့အမှုကို အမှုမှန်ကိုပေါ်ပေါက်အောင် တရားမျှတစွာစစ်ဆေးပေးကြဖို့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေဟာ change.org ကနေတစ်ဆင့် […]
အသက် ၈၉ နှစ်အဖွားအို မုဒိန်းကျင့်ခံရမှု …
အသက် ၈၉ နှစ်အဖွားအို မုဒိန်းကျင့်ခံရမှု … ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ ခေတ်ကြီးလို့ပြောဖို့ လုံလုံလောက်လောက်ရှိနေပြီထင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ကာမရမ္မက်တွေက ပိုပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတာကို တစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ တစ်လနဲ့တစ်လ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ပိုပိုပြီးများပြားထူးခြားလာနေတာကိုတွေ့ရပအါတယ်။ မုဒိန်းမှုတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းနဲ့ချီပြီး အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်လာနေတာကို လည်းတွေ့ရပါ တယ် …။ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရပ်တွေကတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းတွေနဲ့ အရွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ အသက်အရွယ် […]
ဆရာဝန်တစ်ဦးပြောပြလာတဲ့ မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အသက် ၉ နှစ်သမီးလေးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု….. လာပြန်ပြီ ဒီနေ့လည်း ရဲနဲ့သမီးကလေး နဲ့ဆေးရုံကို … တရားသူကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့ FIR ကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁.၇.၁၉ ညနေမှာပျောက်သွားတဲ့ကလေးမလေး အသက်က၉နှစ်တဲ့။Facebookမှာတောင်တက်နေတာတဲ့ ကိုယ်တောင်မသိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်တို့မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ သူ့အမေဆီကနေ Consent ယူပြီးတော့ စစ်ရတော့တာပေါ့ …။ […]
Song-Song စုံတွဲရဲ့ အဆုံးသတ်ကို အရိပ်အယောင်ပြနေခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
Song-Song စုံတွဲရဲ့ အဆုံးသတ်ကို အရိပ်အယောင်ပြနေခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု Song Joong Ki ရဲ့ မန်နေဂျာကတော့ ဒီနှစ်ဧပြီလထဲမှာ မင်္ဂလာဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Song Joong Ki ကတော့အဲဒီမန်နေဂျာနဲ့အတူ အလုပ်လုပ်နေတာနှစ်တော်တော်ကြာပြီဖြစ်ပြီး Song Joong Ki နဲ့အတူ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့သမျှ သူတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အဲဒီမန်နေဂျာနဲ့ဆို […]
အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေသူ သမီးငယ်​ကိုပါ ပစ်​​ပြေးသွားခဲ့တဲ့ မိခင်​ သန်​လျင်​မြို့နယ်​၊ ပျဉ်​​ထောင်​​ကျောင်း​ကျေးရွာမှာ​နေထိုင်​တဲ့ မမိုးမိုး ​ခေါ် မတင်​မိုးလို့​အမည်​ရသူ အမျိုးသမီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်​လ ၂၇ ရက်​​နေ့​၊ ကြာသာပ​တေး မနက်​ ၅နာရီခွဲ ဝန်းကျင်​မှာ အိပ်​ယာထဲလဲ​နေတဲ့ လင်​​ယောကျာင်္းနဲ့ ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​​နေတဲ့ သမီးငယ်​​လေးရဲ့ အ​ခြေအ​နေကိုပါ […]